Fanazavana voalohany ny Teny Faneva faha-150 taona – FJKM Ambavahadimitafo Fanazavana voalohany ny Teny Faneva faha-150 taona |
Fanazavana voalohany ny Teny Faneva faha-150 taona
A la une.Jobily 150 taona.Vaovaom-piangonana
Publié le 25 juillet 2012 à 09:07
« Ary aoka ho aminay ny fahasoavan’ny Tompo Andriamanitray; Ary ampitoero aminay ny asan’ny tananay »(Salamo 90:17)
Salamo avy amin’ny vavaka nataon’i Mosesy ho azy sy ny zanak’Israely ka voatambatra ho boky iray ny taona 1405 Talohan’ni Jesoa Kristy ary lazaina fa Salamo zokiny tokoa satria voasoratra talohan’ireo Salamo nataon’i Davida 1020- 925 Tal JK.
Noho ny famaizan’Andriamanitra ny olona tsy manana faharetana tany an’efitra ho any Kanana dia nivavaka tamin’Andriamanitra i Mosesy mba hamindran’Andriamanitra fo amin’izy ireo sy hitahian’Andriamanitra ny ezaka ataony.
Iza moa i Mosesy ?
Mosesy dia Lehilahin’Andriamanitra ary nantsoina hoe Rain’ny Mpaminany satria nahita an’Andriamanitra mivantana sy mifanatri-tava raha notolorana ny Didy folo teo an-tendrombohitr’i Sinay. Manana toerana lehibe izy satria nataon’Andriamanitra fitaovana nanafahana ny Zanak’Israely avy tany Egypta.
Noho ny fahatezeran’Andriamanitra manoloana ny olony feno fimonomononana sy fanomezan-tsiny an’Andriamanitra anefa dia tsy nahazo niditra tao amin’ny tany tondra-dronono sy tantely i Mosesy ary nanendry an’i Josoa izy handimby azy mba hitarika ny Zanak’Israely (Deoteronomia 3 : 21-29). Efa Zokiolona ihany i Mosesy kanefa tsy nahatsiaro fiadanana fa lalim-pahoriana ny androny koa nanandratra izao vavaka izao izy.
Nahoana no mitaraina i Mosesy?
Mitaraina i Mosesy satria ny mahafoy ny andron’ny olona dia ny fahatezeran’Andriamanitra. Ozona ny tsy fahatran’ny olona ny fahaelavelona ary tena tsy zaka ny fahoriana mihatra satria endriky ny fitsaran’Andriamanitra mialoha ny fahafatesana izany : tanisain’i Mosesy fa tsy maintsy ho faty ny olona; mora simba, voaheloka ary jamba manoloana ny fitiavan’Andriamanitra azy (and 3-11).
« Mampianara anay hanisa ny andronay, Hahazoanay fo hendry. » (Salamo 90:12). Tsapan’ny Jiosy na ny hebreo fa olon-kandalo izy ka mbola ahitana izany koa ny Salamo hafa « Jehovah ô,ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko; aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. » (Salamo 39:4).
Iza moa Ilay itarainana ?
Ny and 1-2 dia manamafy ny fanekem-pinoana an’Ilay Andriamanitra Mpiaro sady Fialofana ary koa Mpahary no Mpitahiry ny olona ao amin’ny fahavelomana mandrakizay.
Tompo – Adon (hebreo) – Seigneur – Maitre
Na ny Tompo na ny Andriamanitra dia samy Anarana iantsoana an’Andriamanitra.
Ny Tompo (Adonai) dia tsy tena Anarany fa fiantsoana Azy noho ny fahamasinany. Tsy azo atao rahateo ny manonona mivantana ny Anaran’Andriamanitra (Jereo ny Didy 10).
Koa ny Adonai na ny Tompo (Seigneur) dia Mpitsara sy Mpitondra izao rehetra izao. Eto dia asehon’ny Mpisolo-tena tampisaka « -nay » ny fifamatorana eo amin’ny Mpivavaka sy Ilay Tompo inoany fa manana fahefana feno sy lanjany eo amin’ny fiainany Ilay inoany.
Andriamanitray – El (heb) – Force – Puissance
Izy no Ilay Andriamanitra manatrika hatrany eo amin’ny tantara. Tsy azo sarahana amin’ny fanatrehany ny fihazonany ny Fanekena nataony tamin’ny lasa. Manaiky ho Andriamanitsika Izy ary porofoiny amin’ny famindrany aina ho antsika izany : Izy no ihetsehana sy iveloman’ny olona. Mbola hamafisina ihany koa fa ireharehan’ny Hebreo ny fananany Andriamanitra ambony noho ny andriamanitra rehetra El Elion.
Ny fahasoavana: Naam (heb) – bauté – agrément – grâce – amabilité
Angatahana ny famindram-po sy ny fahalemem-panahiny mba tsy haharitra ny fahatezerany noho ny tsy fananan’i Mosesy faharetana. Koa tsy i Mosesy no nahazo valiny fa isika izay mino an’i Jesoa Kristy ka manaiky fa nofoanan’Andriamanitra teo amin’ny fahafatesan’i Jesoa ny fahatezerany. Ary ny olona mahazo famindram-po dia hanao asa maharitra satria hamirapiratra eo amin’ny asany ny fahatsaran’Andriamanitra ka ho tsara koa ny asany.
Manohy izany ny hafatry ny Apostoly Paoly ao amin’ny Fiangonan’ny Fanekena Vaovao : « Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. » (Efesiana 2:10).
– Tsy hanahaka an’i Mosesy sy ny Zanak’Israely ny mpanara-dia an’i Jesoa Kristy; eny fa na dia eo ambany fahasoavana aza dia hiambina hatrany ka hitandrina ny fifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra.
– Koa eo am-piandrasana ny fiverenany dia raiso ny fitahiana mitafotafo homena ny Fiangonana amin’ny alalan’i Jesoa Kristy amin’izao taon-jobily izao. Ndeha hifaly sy hisaotra an’Andriamanitra amin’ny zava-miseho isan’andro ka ny fiadanan’Andriamanitra no hameno ny fontsika.
– Tsy averintsika intsony ny fahadisoana teo amin’ny tantara dia ny fimonomononana sy ny fifanomezan-tsiny mba hahatonga antsika rehetra hiditra ao amin’ny Tany Vaovao sy ny Lanitra Vaovao. « Izay, na dia tsy mbola hitanareo aza, dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa, satria inoanareo, dia iravoravoanareo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra, » (1 Petera 1:8)
Hafatry ny Komity
Manentana antsika kristianina avy eto amin’ny fiangonana na ny zanak’am-pielezana mba hiara-hientana amin’ny famoronana logo sy hira faneva ho voninahitr’Andriamanitra.
Ny daty farany afaka hanaterana ny logo dia ny 19 aogositra 2012, ary ny hira kosa dia ny 9 septambra 2012. Ny fepetra rehetra mahakasika ny fifaninanana moa dia hitanao eto.
Dia mirary ny fiadanan’ny Tompo ho aminao.